Isizathu Sokuba Cabanga Ukuthenga eshibhile zemininingwane Amathikithi e-Europe? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Isizathu Sokuba Cabanga Ukuthenga eshibhile zemininingwane Amathikithi e-Europe?
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/09/2020)
Ngabe uhlela ukuya eYurophu nomndeni wakho nganoma yisiphi isikhathi kungekudala? Uma impendulo inguyebo, ke uyofuna ukwenza ukusetshenziswa Izincwajana zemininingwane amathikithi eshibhile Europe. Lokho kwesokudla. Ungakwazi asebenzise ezitimela, zazo elishibhile ontengo yakhe yayinqunyiwe lapho ukuhamba kuleli zwekazi.
Lona uma udinga ukwazi indlela ukubhuka amathikithi akho isitimela kusuka kuwebhusayithi kwesokudla noma tour operator. Ngeke ukwazi ukuthola iwebhusayithi elilodwa ethengisa amathikithi izitimela kulo lonke elaseYurophu. Yingakho, ukufunda ku ngokucophelela.
Amasu ajwayelekile yokubhuka izitimela European
Inqobo nje uma ungumnikazi PC noma laptop nge uxhumano lwe-inthanethi, wena ukuhamba. Kumele ungene ku-website esemthethweni ukwenza yokubhuka. Ngokwesibonelo, une wesitimela amanethiwekhi, okuyinto ukukunikeza ikhono ukubhuka amathikithi akho isitimela.
Odinga ukukwenza nje khetha amadolobha kusukela, okuyodingeka ukuba ukubhuka amathikithi yakho isitimela. Khetha emzini lapho yakho uhambo ngesitimela uzoqala. Ngokwesibonelo, uma uhlela bahambela Asia futhi uvakashele United Kingdom.
Khona-ke kuyodingeka ukhethe London njengoba yiphuzu lakho ikhambo. Ungakhetha imizi njengoba zivela kwi-website.
Ezinye zezindawo ungavakashela usebenzisa ezishibhile athenge amathikithi esitimela ngemali Europe zihlanganisa Alicante, Amsterdam, Barcelona, Bern, Bucharest, Copenhagen, Dusseldorf, Hamburg, Oslo, ePrague, Salzburg, nabanye.
Okwenza kube nendaba okuyinto iwebhusayithi oyisebenzisayo?
Uyojabula ukwazi ukuthi wonke amazwe e-Europe unendlela yawo inethiwekhi wesitimela futhi uhlelo amathikithi yokubhuka. Ungathola la ujantshi opharetha ukuthengisa amathikithi isitimela ezishibhile Europe ngesikhathi off-inkathi.
Yingakho, wena belulekwa ukuba uvakashele ngesikhathi off-inkathi njengoba izihlalo izotholakala futhi osomatekisi uyojabula ngamanani ezifanele ngokuthatha kwakho uzungeze idolobha.
Izinto ukwazi ngaphambi kokuthenga ezitimela ezishibhile eYurophu
Kumele ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi, kusukela lapho ukhona ukubhuka amathikithi akho isitimela, luqotho. Kukhona imikhonyovu abaningi inthanethi, ngifuna ukushwabadela abahambi entsha. Njengoba uzobe ekutholeni ezitimela ezishibhile, awuwedwa.
Amathani abahambi abavela emhlabeni jikelele bayahamba ukwenza ukuthenga, ikakhulukazi uma kuziwa alibangisa eYurophu. Yingakho, kubalulekile ukuba uqinisekise iphakethe, yokugibela, kanye uhlelo travel ngaphambi ukubhuka ezishibhile athenge amathikithi esitimela ngemali Europe.
Thanda, sifunda ngenhla, indlela engcono kakhulu ukuhamba Europe kwezomnotho kweza isitimela. Akukhona nje kuphela esheshayo kodwa inikeza wena nalokho nezwekazi imayelana. Wena ngempela bazizwe ubunjalo esishukumisayo le sceneries nezilungiselelo yemvelo.
Lecce Uqeqesha ukuze Salerno
Izitimela ukuze Foggia Salerno
Pisa ukuze Salerno Izitimela
Khumbula, ukuba fun nomndeni wakho, uma uvakashela i-Yurophu – futhi uhlole Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-you-should-consider-purchasing-cheap-train-tickets-to-europe/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#purchaseonline cheaptickets cheaptrains europetrains amathikithi